SomaliTalk.com » RW. Cumar: “Ujeedka Argagaxisadu waa iney curyaamiyaan goobaha ganacsiga, ayna gumaadaan dadka shacabka ah”
Muqdisho, 28, Maarso, 2015…Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashid Cali Sharmarke, oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyey weerarkii nabad-diidku ay ku qaadeen shalay Hotel Maka-Al-Mukarama iyo khasaaraha ka dhashay.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in weerarkii wuxushnimada ahaa lagu dilay 14 qof, oo toban ka mid ah ay ahaayeen dad shacab ah, ayna ku dhaawacmeen 13 qof. Dowlada Imaaraatka Carabtuna xiriir ay la soo samaysay xukuumadda ay ka balan-qaaday iney gar-gaar caafimaad u fidinayso dadka dhaawacoodu daran yahay.
Ra’iisul Wasaare Cumar ayaa ku sifeeyey weerarada noocaan ah ineysan raad ku lehayn diinteenna muqaddaska ah iyo dhaqankeena suuban, isla markaan looga dan leeyahay in lagu gumaado dad aan waxba galabsan.
“Waa inaan shacab iyo dowladba u istaagnaa sidii aan uga shaqayn lahayn amniga, meelna uga soo wada jeesan lahayn kuwo doonaya inay damiyaan iftiinka horumarka, bur-burinta goobaha ganacsiga iyo beegsiga dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan.”
Ugu danbayntii, RW ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iney u midoobaan dagaalka ka dhanka ah argagaxisada, oo caado ka dhigtay xasuuqa dadka aan waxba galabsan, islamarkaan doonaya iney si khasab ah dadka uga dhaadhicyaan fikirkooda khaldan.
Waaxda Warfaafinta ee Xafiiska R/Wasaaraha